Upload တင်ခြင်း နှင့် Download လုပ်ခြင်း အကြောင်း ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ » Upload တင်ခြင်း နှင့် Download လုပ်ခြင်း အကြောင်း
By နေမင်းမောင်6:00 AM5 comments
ကျွန်တော် ဒီနေ့တော့ မသိသေးတဲ့ သူများအတွက် Upload တင်ခြင်းနှင့် Download ချခြင်းဆိုတာကို ပို့စ်တစ်ခု အနေနဲ့ ရေးပေးသွားပါမယ် .. ကျွန်တော့်ကို အကိုတစ်ယောက် Uploading Site တွေအကြောင်း မေးထားတာ လေးတွေရှိတာနဲ့ ဗဟုသုတ အနေနဲ့လည်း Uploading ဆိုတာဘာကို ခေါ်တာ ဘာအတွက် အသုံးပြုတယ် ဆိုတာရယ် Downloading ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာ ဘာအတွက် အသုံးပြုတယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော် ရေးပေးသွားပါမယ် .. ပြီးမှ Uploading ဆိုဒ်တွေအကြောင်းနဲ့ ဘယ်လိုအသုံးပြု ရတယ်ဆိုတာကိုပါ ဆက်ပြီးရေးပေးသွားပါမယ် .. ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းကို ရေးချင်နေတာ ကြာပါပြီ .. အများစုက အင်တာနက်မှာ ကိုလိုချင်တာကို ဒေါင်းလော့ချမယ် အဲ့ဒါကို ဒေါင်းလော့ချတယ်လို့ ခေါ်တယ်ဆိုတာထက်ပိုပြီး မသိကြပါဘူး .. တစ်ခါတစ်လေ ပြောနေကြတာ ကြားရပါတယ် .. ငါအင်တာနက် ကနေ Upload တင်လိုက်တာ ဆိုပြီးတော့ အမှန်တော့ သူပြောချင်တာ ဒေါင်းလော့ ချတာကို ပြောချင်တာပါ .. အဲ့ဒီအတွက် မသိသေးတဲ့ သူများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတော့ ကျွန်တော် ဒီပို့စ်လေးကို ကျွန်တော် နားလည်သလောက် ပြန်ပြီးတော့ ရေးပေးသွားပါမယ် ..
ကိုဝင်းမြင့် November 25, 2011 at 2:12 PM
ဟုတ်ကဲ့ဗျာ တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ဗျာ ဒီဆိုဒ်တစ်ခုလု့းကို save page as နဲ့အကုန်ဒေါင်းထားတယ်ဗျ။
phone win December 3, 2011 at 8:33 AM
thank u for this page.
ဒီပိုစ်ကို ဖတ်ရတော့ ငါမသိသေးတာတွေ အများကြီးရှိပါသေးလားလို့ သိရပြိး လူပြိန်းတယောက် နားလည်လောက် အောင် ပုံနဲ့ တကွ ရှင်းပြပေးထားတဲ့ အတွက် အများကြီး အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း....Bookmark မှာ Save ထားလိုက်ပါတယ်. နောင်ကိုလည်း ဒီထက် ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးများရှိရင် တင်ပေးပါအုံး... Thanks
aung March 12, 2012 at 3:28 PM